​मोदीले विराटको चुतौती स्विकार्दै भने : म पनि व्यायाम गरेको भिडियो छिट्टै सार्वजनिक गर्छु
Thursday, 24 May, 2018 5:35 PM
१० जेठ, काठमाडौं । भारतमा केही दिनदेखि उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा खेलाडीहरूमाझा ट्विटरमा एउटा लहर व्यापक चल्यो । उनीहरुले आफूले व्यायाम गरेको भिडिओ एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक गरेका छन् ।
खेलमन्त्री राज्यवर्धन राठोरले आफूले व्यायाम गरेको भिडिओ राखेर अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न चुनौती दिएपछि ट्विटरमा ‘ट्रेन्ड’ सुरु भएको हो।
राठोरले नामै तोकेर चुनौती दिएपछि भारतीय क्रिकेट खेलाडी विराट कोहलीलाईले त्यो चुनौती स्वीकारे।
आफ्नो भिडिओ राख्ने क्रममा कोहलीले फेरि नामै तोकेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उक्त चुनौती दिए।
मोदी पनि के कम ! उनले आफूले सो चुनौती स्वीकार गरेको जनाएका छन्। उनले ट्विट गरेका छन्, ‘च्यालेन्ज एसेप्टेड, विराट ! म पनि आफ्नो फिटनेस च्यालेन्जेज भिडियो छिट्टै सेयरिङ गर्नेछु ।’
राठोरको ट्वीटलाई नौ हजार पटक रिट्विट गरिएको छ। त्यसले बाक्लै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ। प्रतिक्रियास्वरूप केही भारतीय मन्त्रीहरूले पनि उस्तै भिडिओ राखेका छन्।
बलिवुडका अभिनेता ऋतिक रोशन, भारतीय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान मिथाली राज अनि अन्य खेलाडीले पनि त्यस्तै गरी आफूहरूले व्यायाम गरिरहेको भिडिओ राखेका छन्।
गत मार्चमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘स्वस्थ भारत’ अभियानको आह्वान गरेका थिए। उनले खासगरी योगको फाइदा उल्लेख गरेका थिए।
उनले योगाभ्याससँग सम्बन्धित सामग्री आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने गरेका छन् ।
खेलमन्त्री राठोरले पनि उनको अभियान प्रधानमन्त्रीको स्वस्थ भारतको उद्देश्यप्राप्तिका लागि सहायक हुने ठानेका छन्।